A ga-ebido Realme GT 5G na Machị 4 | Gam akporosis
Realme na-achọ iwebata ekwentị ọhụụ, dịka nkwupụta ị mere site na akwụkwọ mmado ị biputere n'oge na-adịbeghị anya, na-abịa Ezigbo GT 5G. Ọ bụ Machị 4 ụbọchị nke a ga-eweputa ama ama a.
E nwere ọtụtụ atụmanya gburugburu mobile a, dịka a na-ekwu ya nwere ike ịbụ onye mbụ na-abata na teknụzụ na-ebu ngwa ngwa nke 125W, nke kachasị na ụlọ ọrụ ama ama. E gosipụtala nke a n'okpuru aha UltraDart ma si na Realme.
Kedu ihe ndị Realme GT 5G nwere ike igosi?
Ọ bụrụ na Realme GT 5G mechara jiri ọsọ na-abịa 125W UltraDart, anyị ga-enweta ọsọ ọsọ site na 0% gaa na 100% n'ihe dị ka nkeji 30 ma ọ bụ, dabere na ikike batrị ngwaọrụ ahụ, ọbụlagodi obere. Na mgbakwunye na nke a, a na-eche na batrị ekwentị ga-adị ihe dị ka 4.500 na 5.000 mAh.
A na-atụ anya na ekwentị ga-arụ ọrụ dị elu, yabụ na anyị agaghị enweta SoC dị ala karịa Snapdragon 870 n'okpuru mkpuchi ya. Agbanyeghị, ụfọdụ ụlọ mgbasa ozi kwuru na thelọ ọrụ ahụ ga-eweta ya Snapdragon 888, Qualcomm kachasị ike na arụmọrụ kacha mma maka chipset maka afọ a dị elu.
A ghaghi itinye 12 GB nke RAM nke gbakwunye na 256 GB nke ebe nchekwa dị n'ime nke ekwentị ga-anya isi. Tụkwasị na nke a, a na-atụ anya na a ga-enwekwa iche iche nchekwa dị iche iche, nke a kpọtụrụ aha bụ nke kachasị.
Realme GT 5G nkwupụta ọkwa
Ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ ga-abụ nke teknụzụ ma gosipụta ọnụego ume nke 120 Hz. Na mgbakwunye, diagonal ya ga-abụ 6.81 sentimita asatọ, yabụ anyị agaghị eche ihu obere mkpanaka. N'agbanyeghị nke a, ọ nwere ike ọ gaghị abụ nnukwu ahụ, ebe ọ bụ na bezels nke ga-ejide ihuenyo ga-ebelata na okwu ha kachasị, ọ bụ ya mere nha ihuenyo ahụ ga-eji karịa 90%.
N'aka nke ọzọ, igwefoto quad ọ gaara enwe ga - eduga 64 sensọ isi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme GT 5G ga-arụ ọrụ na Machị 4: ọ nwere ike ibute na ngwa ngwa 125 W